I-Seclude - i-villa yabucala enamagumbi okulala ayi-6 eRamgarh, e-UK - I-Airbnb
I-Seclude - i-villa yabucala enamagumbi okulala ayi-6 eRamgarh, e-UK
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguRohit
URohit unezimvo eziyi-143 zezinye iindawo.
I-Seclude Taradale yindlu encinci enamagumbi okulala ayi-6 "kude nekhaya", ebekwe phakathi kweendawo zendalo ezifihlakeleyo kwaye inomtsalane nezakhiwo zakudala. Ifilosofi yethu kukwenza uzive usekhaya ngendlela efudumeleyo, enabantu abambalwa nabangaqhelekanga, ngaphandle kokubeka esichengeni ubutofotofo, inkonzo, ucoceko kunye nomgangatho wokutya, ukuqesha italente yasekuhlaleni kunye nemizamo yokuba yihotele eluhlaza & engayonakalisiyo indalo. Indawo yethu ayikho endleleni ibe uyakwazi ukuhamba ngeenyawo nje kancinci, nto leyo eyongeza ukuzola kwendlu yethu.
I-Seclude Taradale yindawo entle yokuqhuba iiyure eziyi-7 ukusuka e-Delhi, kwaye ilele kwindawo epholileyo yaseRamgarh kumantla-mpuma-mpuma wommandla weHimalayas. Le ndawo ayifumanekanga kodwa idla ngokubizwa ngokuba yibhaskithi yeziqhamo yephondo elihle lase-Uttarakhand ngenxa ye-peach yayo ephithizelayo, i-platum, i-apricot, i-apile kunye ne-pear orchards. Ubuhle beRamgarh kunye neentaba zayo ezintle ezijikelezileyo, iOak & amp; amahlathi aqaqambileyo, umoya opholileyo kunye nesibhakabhaka esikhulu esicacileyo sitsale izindlu eziliqela zeefekthri kunye nezasebukhosini ukuze zilungise iindawo zazo apha ngenkulungwane ephelileyo. Uxolo nokuzola kwale ndawo kwakhuthaza abantu abafana noRabindranath Tagore owayephethe iinxalenye zeGitanjali yakhe eyaziwayo apha.
Sinompheki, ukucocwa kwendlu, umncedisi kunye nomphathi ofumanekayo endlwini. Ukutya kunoku-odola kwimenyu efumanekayo kwindlu ngeendleko ezongezelelweyo, sinezinto onokukhetha kuzo - ukutya kwasekhaya kunye ne-la-carte.
Indlu iseMalla Ramgarh iikhilomitha eziyi-4 ukuya kweziyi-5 ukusuka kwimarike yasekuhlaleni neekhilomitha eziyi-24 ukusuka eNainital.